तिनाउ र मिसन डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने निर्णय
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न सरकारले गरेको सहजीकरणलाई पछ्याउँदै मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र तिनाउ डेभलपमेन्ट बैंक एक आपसमा गाभिने भएका छन् ।
शेयर बजारमा ७ दशमलव ४७ अंककाे गिरावट
काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिनमा सुधार देखिएको धितोपत्र बजार आज भने घटेको छ ।
काठमाडौँ । आज सुनको भाउ घटेको छ । आज छापावाल सुन तोलाको ५९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आइतबार तोलाको ६० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
विमानस्थल पदाधिकारीलाई सांसदकाे प्रश्न : दुई अर्ब बक्यौता कहिले उठ्छ ?
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले उठाउनुपर्ने करीब रु. दुई अर्बको बक्यौता रकम उठाउन सम्बन्धित निकाय तथा संस्थालाई ताकेता गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साढे १२ सय मेगावाट विद्युत थपिँदै, प्रसारण लाइनकाे अभावमा खेर जाने सम्भावना
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा कूल एक हजार २६९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ ।
शेयर बजारमा ६ अंककाे वृद्धि
काठमाडौँ । शेयर बजारमा आज ६ अङ्कले वृद्धि भएको छ ।
काठमाडौँ । आज छापावाल सुन तोलाको ६० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाए अनुसार आज तेजावी सुन ५९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदी तोलाको ७३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
पानीको सतह घटेसँगै माछा पोखरी सुक्न थाले, निराश बन्दै कृषक
इनरुवा । सुनसरी वराहक्षेत्र नगरपालिका मधुवन क्षेत्रमा रहेका माछा पोखरी सुक्न थालेका छन् । सप्तकोशी नदीको पानीको बहाव घटेसँगै मधुवन क्षेत्रमा रहेका माछा पोखरी सुक्न थालेका हुन् ।